कसरी एक मको जस्तै ड्रेस अप गर्नुहोस् | Experience Japan
› ब्लग Nepali › कसरी एक मको जस्तै ड्रेस अप गर्नुहोस्
कसरी एक मको जस्तै ड्रेस अप गर्नुहोस्
कसरी Maikoजस्तै पोशाक गर्न
एक Maikoजो पूर्णतया जापानी समय-सम्मान कला मा प्रशिक्षित क्योटो मा एक मनोरंजन, हुन अध्ययन एक महिला को लागि एक लेबल छ। त्यो सामान्यतया एक किमोनो, जापान मा एक औपचारिक outfit रूपमा थकित भएको एक परम्परागत लामो ओढ्ने पहनता। एक किमोनो सबैभन्दा जापानी वस्त्र को पहिचान छ, तर अवधि एक पटक जापान देखि विभिन्न लुगा दायरा पहिचान गर्न प्रयोग भएको थियो। Maikos प्राचीन जापान देखि आफ्नो समकक्षों जस्तै, थप परिष्कृत र मनोरम देखा पर्न थप परम्परागत लुगा र कपडा डिजाइन लगाउने Maikos उत्पत्ति गर्दा।
त्यहाँ माथि एक किमोनो बनाउन र तिनीहरूले परम्परागत जापानी नाम छ वस्तुहरूको दायरा छ। यी समावेश:
Getaकि:परम्परागत जापानी जूता एक एडीबिना
Zori:रूपमाएडी छ किपरम्परागत जापानी
सबै भन्दा अर्को व्यक्ति तिनीहरूलाई राम्ररी मा राख्न मद्दत गर्न आवश्यक एक महिला गरेको किमोनो मा राख्दै प्रक्रियाजूता,एक जटिल छ। एक किमोनो मा राख्दै को कदम तल छन्।
1 पहिले, को juban भनिने पर्ची धारण छ। यो एक प्रकाश bathrobe जस्तै महसुस गर्नुपर्छ र छेउमा खासा गाँसिएको हुनुपर्छ।
2. दोस्रो चरण जब किमोनो धारण छ। आफ्नो हथियार रेशम बाहिरी किमोनो ओढ्ने शीर्ष slits मार्फत जानु पर्छ। यसलाई धारण छ पछि, ओढ्ने पछाडि प्यानल आफ्नो फिर्ता संग केन्द्रित भएको निश्चित गर्नुहोस्।
3. अर्को, यो ओढ्ने को दाहिने तिर बायाँ आफ्नो शरीर वरिपरि पहिलो र्याप। त्यहाँ अतिरिक्त सामाग्री छ भने, यो ओढ्ने आफ्नो फिर्ता गर्न वरिपरि पुग्छ कि ठीक छ। यो ओभरल्याप त बाँकी पक्ष र्याप। देखाउन यदि juban पर्ची समायोजन गर्नुहोस्।
7 अर्को, दुई OBI hanhaba सँगै समाप्त बाँध र फीता कस। यो एकदम अर्को चरणको लागि तंग हुन आवश्यक हुनेछ। यस OBI समाप्त अब OBI वा datejime मा tucked गर्नुपर्छ। यस OBI पर्याप्त तंग हो भने, फीता गिरावट बाहिर छैन। सबै प्यानल स्तर छन् र केन्द्रित त किमोनो ओढ्ने गर्न अन्तिम समायोजन गर्नुहोस्।
एक किमोनो मा राख्दै अन्तिम कदम रोजेको केश र सामान को स्टाइल छ। यो एक किमोनो लगाएका अन्य महिलाहरु अलग्गै Maiko सेट के छ। आफ्नो बाल शैली र accessorises थप परम्परागत र extravagant अन्य विकल्प बाहिर छन्। Maikos पनि उनको प्रशिक्षण को के चरण तिनीहरूले हुनुहुन्छ आधारमा ड्रेस र फरक आफूलाई शैली,। एक Maiko एक विशिष्ट बाल शैली एक रोटी जस्तै सरल updo छ। तिनीहरूले बन्द तिनीहरूले गीशा महिलाहरु लगाउने कि wigs earnt छैन भनेर प्रमाणित, को hairline मा unpainted छाला को एक दल देखाउँछ। आफ्नो updo नाजुक बाल गहने वा kanzashi संग सजाया छ। Maiko फूल kanzashi विभिन्न मौसम वा बिदा मा बाँध कि लगाउन मनपर्छ।
अन्तिम सामान जूता, झोला र प्रशंसक समावेश गर्नुहोस्। एक किमोनो को geta वा zori शैली या त को चप्पल को एक जोडी संग पहना गर्नुपर्छ। चुनिएको झोला पनि साथै सामान्यतया थप परम्परागत छ। यी किमोनो बैग भनिन्छ र केही तरिका मा किमोनो को कपडे मेल छन्। तिनीहरूले सामान्यतया परम्परागत किमोनो राज बस्त्र समान कपडा बाहिर छन् रूपमा किमोनो बैग भनिन्छ। अन्तमा, एक जापानी maiko उनको प्रशंसक बिना बाहिर जान हुँदैन। यी सामान्यतया बाक्लो कागज बनाउनुभयो र रंग को दायरा उपलब्ध छन्। केही पनि आंशिक डिजाइन गरेको छ वा धातु रंग समेटिएका छन् – वा सुन पात! तिनीहरू केवल सौंदर्य उद्देश्यका लागि साजसज्जा छैनन् यी प्रशंसक महत्त्वपूर्ण छन्। Maiko नृत्य र चिया समारोह सहित गतिविधिहरु, एक सीमा आफ्नो प्रशंसक प्रयोग गर्नुहोस्। यी सामान्यतया सहज पहुँचका लागि OBI वा रेशम बेल्ट मा राखिन्छ।
Maikos सामान्यतया जहाँ तिनीहरूले वर्ष सयौं लागि गरेका रूपमा व्यवसायीक उच्च वर्ग प्रदर्शन दिन जारी क्योटो क्षेत्र, वरिपरि छन्। धेरै maikos बस Maikoya केन्द्र फेला ती जस्तै, पर्यटक र पर्यटकहरूलाई आफ्नो परम्परागत कला देखाउन एक कल पाएका छन्।
आज जापानी संस्कृति को यस्तो परिष्कृत प्रतीक पूरा गर्ने मौका बाहिर सम्झना छैन!